Wasiir Ummadu Kama Wada Shaqayn Karto Farxadaada! Faallo |
Wasiir Ummadu Kama Wada Shaqayn Karto Farxadaada! Faallo
Wasiirka Madaxtooyadda Jamhuuriyadda Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa mar kale shalay wax ka sheegay caqliga dadka dhaliila geedi socodka Siyaasadda Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo. Waxaana uu ku sifeeyay “Dad cuduro qaba oo horumarka ka soo hor jeedda”
Yaan qarrin taraarine aan qirro in aan la necbayn marnaba oo la soo dhaweynayo wixii horumar ah ee dalka Xukuumadaasi u keento. Laakiin, su’aalaha saldhiga ciidanka ee Berbera iyo Dekeda lafteedaba la iska weydiiyay waxaa ay ahayd haddana tahay oo looga taag waayay madaxtooyadda cadeeya danta ummada ugu jirta hawshan oo heshiisku banyaal ha noqdo, daaha ka rogga shirkadahan shidaalka ee Xaalufiyay erladda waxaa ay ummadu ka dheefayso oo taabsiiya oo xoog dalka kumaydaan qabsane dadkii idin doortay ee shaqadda idiin dhiibtay la xisaabtama. Weliba waxaan jirin mucaarad abaabulan oo si huffan u gaylami karra oo Mudane Siilaanyo waa uu ka sii gaashaantay taas. Laakiin, qayladdu inta waa ka badan lahayd. Haddana, waa kuwaas. Wasiir Maxamuud waxa uu su’aashaas u qabaa Kud iyo Caal iyo Qaniin. Waxaabu I xasuusiyay Jacburkii Abwaan Hadraawi ee Isa Sudhan. “Tolow dawlad dhega-xidhan
QALINKII MUSTAFE SHEEKH CUMAR GEEDI